Macnica Americas နှင့် intoPIX သည် SMPTE4နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံနှင့်ပြပွဲတွင် RTP သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် TICO lite compression ကို အသုံးပြု၍ IP မှတဆင့် UHD2015K Live ထုတ်လုပ်မှုအတွက် FPGA ရည်ညွှန်းဒီဇိုင်းအသစ်ကိုယူဆောင်လာခဲ့သည်။ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Macnica အမေရိကနှင့် intoPIX အဆိုပါ SMPTE4နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံနှင့်ပြပွဲမှာ RTP သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် TICO Lite ချုံ့သုံးပြီး IP ကိုကျော် UHD2015K တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုအသစ်တစ်ခု FPGA ရည်ညွှန်းဒီဇိုင်းကိုဆောင်ကြဉ်း
တစ်ဦး Altera FPGA အပေါ် running အသစ်ဒီဇိုင်း 4GbEthernet ကွန်ယက်ကိုအခြေခံအဆောက်အအုံများကိုကျော်အမြင်အာရုံ Lossless UHD10K သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, အနိမ့်အောင်းနေချိန်ရရှိ
Macnica အမေရိကတိုက်IP ကိုဖြေရှင်းချက်ကျော်ဗီဒီယိုတစ်ဦးဦးဆောင်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းခြင်း, intoPIX, compression နည်းပညာများတစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူ, အမှာ RTP ကျော် TICO ပေါ့ပါးတဲ့ compression သုံးပြီးစတူဒီယိုအခြေခံအဆောက်အအုံအတွက် IP ကိုကျော် UHD4K သယ်ဆောင်ရန်ဒီဇိုင်းသစ်တစ်ခု FPGA ဖြေရှင်းချက်သရုပ်ပြ SMPTE 2015 နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံနှင့်ပြပွဲ, ဟောလိဝုဒ်ကယ်လီဖိုးနီးယားအဆိုပါ Macnica Booth, Solano Canyon အအခန်းထဲမှာ, တဲ SC7 မှာ။
အဆိုပါဆန္ဒပြပွဲတခု Altera သုံးပြီးတစ်ဦး Altera FPGA ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကိရိယာအစုံတပ်ဆင်ထား HDMI 2.0 အတွက်ဒုတိယ input ကိုတစ်ဦးလျှင် UHD 4K 60 ဘောင်နှင့်အတူ4IP ကိုအမာခံ: 2: 2, intoPIX TICO အိုင်ပီပု encoding ကလုပ်နေတာနှင့် Macnica အမေရိကတိုက်ရဲ့ IP-cores 10GbE ကျော် RTP နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကျော်မြေပုံလုပ်နေတာ cores ။ 9: တစ်ဦးကအလွန်နိမ့်အောင်းနေချိန်စုစုပေါင်း4pixel လိုင်းများနိမ့်ဆုံးနှင့်အ 1 ဖို့ compression တက်နှင့်အတူအောင်မြင်နိုင်ပါသည်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူ Altera ရဲ့အနီးကပ်ပူးပေါင်း, intoPIX နှင့် Macnica, 4GbE ကျော်စစ်မှန်တဲ့ 60K10 ဗီဒီယိုကိုသယ်ယူပို့ဆောင်အဖြစ် Altera ရဲ့ရန်ချောမွေ့စွာဘာသာပြန်ချက်ပြသနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ဖွ HDMI 2.0 အိုင်ပီ။ ဒါကဗွီဒီယိုတစ်ခုလုပ်ငန်းအသွားအလာအတွက်အဖြစ်မှန်အိုင်ပီကွန်ယက်ကိုအောင်အတွက်အခြားသိသာထင်ရှားသောခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ် "ဟု Umar မဂို, Altera, ဒါရိုက်တာအသံလွှင့်စီးပွားရေး Unit.
"ငါသည်ntoPIX ရဲ့ TICO codec RTP သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်များအတွက်စုံလင်သောလျောက်ပတ်သည်။ အဆိုပါဗွီဒီယိုအရည်အသွေးအမှန်တကယ်အမြင်အာရုံ Lossless ဖြစ်တယ်, တစ်ဦး 1080p စီးကဲ့သို့တူညီသော bandwidth ကိုယူထားသော။ ကျနော်တို့ဖောက်သည်ထုတ်လွှင့်ဖို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အိုင်ပီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းနည်းများကိုရောက်စေဖို့ IntoPIX နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ပူးပေါင်းတန်ဖိုးထား "မာ့ခ် Levy, Macnica အမေရိကတိုက်, CTO ဖြစ်သူကပြောပါတယ်။
"Macnica အမေရိကတိုက်သစ်ကို IP ကို-based စတူဒီယိုအခြေခံအဆောက်အအုံများအတွက်သင့်လျော်သော 4GbE IP ကိုကျော် UHD-10K သယ်ဆောင်ရန် RTP မြေပုံနှင့်အတူ TICO ပေါ့ပါးတဲ့ compression အပေါ်အခြေခံပြီးအပြည့်အဝကိုကိုးကားဒီဇိုင်းဖြေရှင်းချက်၏ပထမဦးဆုံးပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ intoPIX နှင့် Macnica အမေရိကတိုက်ပြီးသားအောင်မြင်စွာ TS ကျော် VSF TR01 JPEG2000 နှင့် ST2022-1 /2ဒီဇိုင်းကိုရောက်စေဖို့အတူတကွအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ။ အခုအသစ်ရည်ညွှန်းဒီဇိုင်းနှင့်အတူကျနော်တို့အိုင်ပီ-based ဂေဟစနစ်ဆီသို့ဦးတည်စျေးကွက်ရွှေ့ပြောင်းအရှိန်မြှင်နောက်တဖန်အတူနေကြတယ် "ဟု Gael Rouvroy, intoPIX CTO ဖြစ်သူကပြောပါတယ်
Macnica SMPTE 2022 ထုတ်ကုန်: www.macnica.com/web/americas/10g-video
Altera အပေါ် TICO FPGA-based ထုတ်ကုန်: www.intopix.com/AlteraTICO
2015 4K ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC စွဲငြိဖွယ်ရာ isovideo isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော JCT-VC ကို ဆူညံသံလျော့ချခြင်း UHD / 4K / HD ကို viarte ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် Warsaw ကို 2015-10-29
ယခင်: intoPIX အဆိုပါ SMPTE 2015 နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံနှင့်ပြပွဲမှာ TICO ပေါ့ပါးတဲ့ compression ကို အသုံးပြု. UHDTV Hybrid ကို SDI / IP ကိုအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါတင်ဆက်ပေးတယ်
နောက်တစ်ခု: CCW 2015 ကုန်ပစ္စည်းကို Preview မှာ Riedel ဆက်သွယ်ရေး